Semalt: WordPress 10 Famoronana plugins amin'ny 2017
WordPress plugin dia tompon'andraikitra amin'ny fanitarana ny fonctionn'ny tranokala iray. Manampy ireo endri-javatra vaovao amin'ny tranokala sy bilaogy e-commerce ary voasoratra ao amin'ny tenim-pampianarana PHP. Ny plugins dia mahatonga anay mora hampiana zava-baovao, loko, ary fametrahana amin'ny tranokalanay.
Ny fifidianana ny tsara indrindra WordPress plugin dia mety hikorontana, fa eto Frank Amnesty, manam-pahaizana manokana momba ny Semalt , dia nifanakalo hevitra 10 fampiasa indrindra WordPress plugins tamin'ity taona ity.
1. WordPress SEO avy amin'i Yoast
Io dia iray amin'ireo WordPress plugins indrindra sy Yoct. Ity plugin SEO ity dia manampy ireo lohateny sy famaritana ao amin'ny lahatsoratry ny blôginao ary mamela anao manampy rakitra misokatra sy meta data. Azonao atao ihany koa ny manao fanadihadiana pejy, afaka mamoaka ny sitemaps xml ary manao zavatra bebe kokoa amin'ny plugin tanteraka
Ny BackupBuddy dia mora ampiasaina sy namana WordPress plugin. Manampy anao hamerina ny rakitrao ary manampy amin'ny famolavolana ny lahatsoratrao. Ankoatra izany, BackupBuddy dia manampy amin'ny fiarovana ny votoatin'ny tranonkala amin'ny mpangalatra sy ny viriosy. Mitahiry ny rakitra voatahiry ao anaty rahona sy fahatsiarovana hafa.
Ny haavon'ny tranonkalanao dia tena manan-danja tokoa ho an'ny fanatsarana karoka fikarohana . Miaraka amin'ny Cache Total W3, afaka manatsara ny haavon'ny tranonkalanao ianao ary mety hampihena ny fotoana famenoana azy, izay tena hampihena ny sanda entinao.
Ny WPForms dia iray amin'ireo plugins izay tsara indrindra sy tsara indrindra hatramin'izao..Izy io dia manampy amin'ny fitifirana sy ny fametrahana ny rafitra fanorenana an-tserasera ary mamela anao mora mamorona mailaka fisoratana mailaka, volavolam-bola, taratasy fangatahana ary karazana hafa amin'ny aterineto. Ny dikan-teny maimaim-poana dia tsara handehanana, fa azonao atao ihany koa ny manandrana ny dikan-karama.
Raha mailaka na mpizara media ianao, dia azonao atao ny manandrana ny OptinMonster. Izany dia WordPress plugin lehibe sy mahagaga ary nampiasain'ny mpandraharaha. Manampy anao hampitombo ny isan'ny mpanjifanao mailaka izany ary hampiova ny mpanjifanao ho mpividy sambatra.
6. Hanova ny rano
Miaraka amin'ny Flow Manova, afaka manitsy ny lahatsoratra nosoratanao teo aloha ianao. Ity WordPress plugin ity dia manampy anao hitantana ireo kalandrie famoahana, fanehoan-kevitra, ary lahatsoratra bilaogy. Azonao atao ny mampifanaraka ny votoatiny araka ny fepetra takinao ary mamolavola tetik'adim-pivarotana ao amin'ny marketing (content)
ho an'ny vokatra tsara indrindra.
Azo antoka ny filazana fa Soliloquy no WordPress plugin tsara indrindra ho an'ny tranonkala miresaka. Izany dia manampy anao hampitombo ny fahombiazan'ny tranonkalanao raha tsy manimba ny SEO. Ny plugin dia mora ny mametraka azy ary voafehy miaraka amin'ireo gidro sy blazer hafa mba hisafidy.
Sucuri dia plugin feno izay manampy anao hanara-maso ny fiarovana sy ny filaminan'ny tranonkalanao. Raha te-hisoroka ny hackers na ny viriosy amin'ny fanoherana ny tranonkalanao ianao, dia tokony hahazo an'i Sucuri ianao rehefa manolotra fampitandremana mivantana amin'ny tena izy, sy scanner amin'ny fisorohana ary ny fanesorana malware.
9. Betsaka ny Social Bar
Ny iray amin'ireo fitaovana maoderina amin'ny haino aman-jery sosialy tsara indrindra amin'ny fiaraha-monina. Mahavariana ho an'ny tranokalan'ny WordPress izany ary manana safidy maro tsy miankina amin'ny media sosialy. Ity plugin ity dia ahafahanao mampidira rohy fampahalalam-baovao sosialy mahasoa ho an'ny mpampiasa maro.
Ity plug-in WordPress default ity dia manana safidy maro ary manomana ny valin-kevitrao amin'ny tranonkala. Antoko fahatelo no manamarika plugin izay tsy misy fiantraikany amin'ny servero ary manao asa isan-karazany Source .